UKUHAMBA KOMNTU OWENSIWEYO
Nge-2 ka-Epreli, ngo-2022
IZiko loLondolozo lweMbali laBantwana laseWilmington lichulumancile ngokubonisa uMnyhadala wethu weSine woNyaka woMlinganiswa kwiigadi ezintle zegazebo zaseLong Leaf Park.
Sijoyine ngentsasa yobumnandi kunye nokucinga kunye namaqhawe akho owathandayo, amakhosazana, kunye nabalinganiswa bencwadi yamabali. Qokelela amakhadi e-autograph kunye neefoto zabalinganiswa obathandayo, khangela kwaye ufumane ubuncwane obufihliweyo kunye ne-Enchanted Scavenger Hunt, kwaye uqeqeshe njengobomi bokwenyani i-Super Hero!​
Nge-2 kaMeyi, 2022
Sizibandakanye nathi kwiTumente yoNyaka ye-11 yaBantwana kwiGalufa yaBantwana eCape Fear Country Club. Bhalisela ifandesi ethe cwaka, uzibandakanye njengomntu, okanye wakhe iqela lakho njenge-foursome eqhelekileyo. Le tumente ibonelela ngosuku lwegalufa ekumgangatho ophezulu eCape Fear Country Club, isidlo sasemini esinebhokisi, amabhaso, kunye nefandesi ethe cwaka. Qiniseka ukuba ubhalisele ukubhida kwifandesi yethu ethe cwaka ukuze ube nethuba lokudlala kwezinye zezona zifundo zintle eMzantsi-mpuma. Kuza kubakho amabhaso abo bagqibezela iqela eliphezulu abathandathu kunye namabhaso kwababini abakufutshane nephini.
NgoSeptemba 12, 2021
Umntu wakho omncinci kunye nonodoli wakhe amthandayo okanye umhlobo oxutyiweyo umenywe ngokusemthethweni kwiMyuziyam yaBantwana yeTeddy Bear Tea yaseWilmington. Sijoyine ngeCawa, nge-24 ka-Epreli, ukusuka ngo-2:00 ukuya ku-3:30 PM kwisitishi #2. Dlala imidlalo yakudala, ujoyine i-Teddy kunye ne-Dolly parade, funda kuWaltz, uhombise izimuncumuncu zakho, kwaye wonwabele iziphungo ezipholileyo kwi-china yakudala.
Nge-23 kaOkthobha, 2021
Sijoyine kwiYachtVenture yoNyaka ye-11! IYachtVenture ngowona msitho wethu mkhulu nowona unika umdla wokunyusa imali enyakeni! Yonwabela ubusuku phantsi kweenkwenkwezi ukhenketha iiyachts ezintle, ukuthengisa izinto zefandesi ezimangalisayo, ukutya ukutya okumnandi, ukusela ii-cocktails kunye nokudanisa ubusuku bonke!